Real Madrid oo dooneysa in Bisha Janaayo ay Heshiis la gaarto Paul Pogba, iyo Kylian Mbappe | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Real Madrid oo dooneysa in Bisha Janaayo ay Heshiis la gaarto Paul...
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay ku rajo weyn tahay inay heshiis hordhac ah la gasho xiddiga qadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba iyo weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe bisha Janaayo.
Mustaqbalka Pogba ayaa weli la hadal hayaa, iyadoo xiddiga reer France uu u muuqdo inuu isku diyaarinayo inuu xagaaga dambe si xor ah uga tago Old Trafford.
Heshiiska u gaarka ah Mbappe ee PSG ayaa sidoo kale dhacaya bisha June ee soo socota, waxaana ku guuleystaha Koobka Adduunka la rumeysan yahay inuu qalbigiisu ku xirnaa inuu u wareego Bernabeu, isagoo seegay inuu u dhaqaaqo suuqii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga.
Los Blancos, sida ay hadda tahay, waxay awoodi doontaa inay la xiriirto Pogba iyo Mbappe bisha Janaayo, sida laga soo xigtay Cuatro , kooxda Carlo Ancelotti ayaa rajeyneysa inay heshiisyo la gasho labada ciyaaryahan bilowga 2022.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Real Madrid ay ku rajo weyn tahay imaatinka Pogba ee Mbappe inuu ku qancin doono Mbappe inuu u dhaqaaqo caasimadda Spain in kasta oo ay xiiseynayaan meelo kale.
Barcelona ayaa sidoo kale lala xiriiriyay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Man United, laakiin kooxda reer Catalan ayaa la sheegay inaysan awoodi doonin inay la saxiixato sanadka soo socda sababo la xiriira dhibaatooyin dhaqaale oo haysta.
Previous articleFashilka Kooxda Barcelona ka heesta xiddiga khadka dhexe ee Man Utd Paul Pogba
Next articleAhlu-Sunna oo saddex jiho laga hareereeyey iyo wararkii ugu dambeeyey Guriceel
Luka Modric oo doonaya inuu u dhaqaaqo Manchester City xagaaga soo...
Antony Blinken oo billaabaya safar qorshihiisa ay qeyb ka tahay xaaladda...